‘परिस्थिति हेरेर कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा जनगणना गर्छौं’ – Butwal 24 News
‘परिस्थिति हेरेर कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा जनगणना गर्छौं’
September 8, 2021 Butwal 24 NewsLeaveaComment on ‘परिस्थिति हेरेर कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा जनगणना गर्छौं’
केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले परिस्थिति हेरेर कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा पनि जनगणना गर्ने जनाएको छ । बुधबार केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को नयाँ कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै विभागले यस्तो बताएको हो ।
नेपाल–भारत विवादित कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकमा जनगणना गर्ने कि नगर्ने ? गर्ने भए कसरी र नगर्ने भए किन ? भन्ने प्रश्नमा विभागका महानिर्देशक नेबिललाल श्रेष्ठले अहिले नै सो क्षेत्रको बारेमा विभाग निर्णयमा पुगिनसकेको तर सोही क्षेत्रको स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँगको छलफलबाट एउटा निर्णयमा पुग्ने बताए ।
सरकारले कात्तिक २५ गतेदेखि राष्ट्रिय जनगणना सुरु गर्ने भएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले कात्तिक सुरु हुने जनगणना मङ्सिर ९ गतेसम्म चल्ने बताएको छ । प्रत्येक १० वर्षमा हुँदै आएको जनगणना यसअघि जेठ २५ देखि असार ८ गतेसम्ममा सक्ने लक्ष्य लिइएको थियो । तर, कोभिड–१९ महामारीका कारण पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम स्थगन गरिएको थियो ।यसअघि स्थगन भएको जनगणना मन्त्रीपरिषद्को निर्णयसँगै फेरी सुरु हुने भएको हो । यही भदौ २१ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले कात्तिक अन्तिमदेखि राष्ट्रिय जनगणना गर्ने तथ्याङ्क विभागको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो ।
यही कात्तिकदेखि हुने जनगणना नेपालको जनगणनाको १२ औँ शृङ्खला हो । जनगणनामा नेपालको घर, परिवार तथा व्यक्तिहरूको निश्चित अवधिमा निश्चित विधि अपनाई पूर्णरुपमा गणना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसपटकको जनगणनामा ३९ हजार गणक तथा ८ हजार सुपरीवेक्षक अनुमानित ७० लाख परिवार तथा ३ करोड जनसङ्ख्याको गणना १५ दिनको अवधिमा सम्पन्न गर्ने छ ।